Maamulka Degmada Shiniile Oo Shir Layeeshay Ururada Fedareeshinka Haweenka - Cakaara News
Maamulka Degmada Shiniile Oo Shir Layeeshay Ururada Fedareeshinka Haweenka
Shiniile(cakaaranews)Jimce, 26ka August 2016. Shir si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qaybgaleen dhamaan ururada fedaretionka iyo leaga haweenka ayaa kaqabsoomay madasha shirarka degmada shiniile ee xarunta gobolka Siti.
Hadaba, shirkan oo uu soo agaasimay xafiiska maamulka degmada shiniile ayaa waxaa shabakada wararka ee cakaaranews uga warbixiyay gudoomiyaha degmada shiniile mudane Cabdi Aadan Kaynaan oo sheegay in shirkani uu ahaa mid wada tashi ah oo u dhexeeya maamulka degmada iyo ururada haweenka degmada shiniile. Wuxuuna intaa kudaray gudoomiyuhu in shirkan lagaga wadahadlayay doorka ay haweenku ku leeyihiin dhinacyada Horumarka, Nabadgalyada iyo Maamulka-suuban.
Dhanka kale, gudoomiyaha ayaa xusay in kulankan lagu kalaqaatay in si wadajir ah looga shaqeeyo horumarka iyadoo ururaduna ay doorkooda kaqaataan sii dardar galinta horumarka, Nabadgalyada iyo maamulkasuuban.
Ugudanbayna gudoomiyaha ayaa carabka kudhuftay in ururada haweeku ay balanqaadeen in siwadjir ah looga shaqeeyo horumarka lana xoojiyo iskuxidhnaanta iyo wadashaqaynta.